Camouflage vesti / SH-1016
Chishongedzo: Silicon label, Elastic inosunga, Piping tambo, Chipurasitiki zipi Mazwi: Kwese-kudhinda nekuda kwekutonhora kwemamiriro ekunze, vanhu vazhinji vanosarudza mbatya dzakareba-dzakapetwa. Chaizvoizvo chisungo chinonzwa kupfeka refu chimiro machira, asi kusarudza mapfupi echimiro hembe hazvina kukwana kuti udziirwe. Saka rakakodzera kwazvo rinofanira kuve jira-rakapetwa. Iyi dhizaini yevheti haisi yemafashoni uye yakanaka chete, asi zvakare iri nyore kune zviitiko. Ichowo chisarudzo chevanhu vazhinji Iyi mhando ho ...
Yakasarudzika hoodie uye bhurukwa / SH-978
Chishongedzo: Hood dhizaini, Heringbone tepi, Silcon chitaridzi, Nylon zipi Mazwi: All-pamusoro yakadhindwa yakatemwa & yakasonwa pani Cotton chivharo mutsvuku rudzi rwechinhu chakarukwa machira machira ane weft sandara tsono uye shinda yakawedzerwa. Mucheka waro wakasununguka, wakareruka uye wakapfava, wakasununguka kupfeka. Iyo ine kukurumidza kunyorova kunyorova uye kuitisa, uye yakaoma uye isiri-inonamira, ndeimwe yemachira anodikanwa nevanhu vazhinji. Iko kusanganiswa kwerima bhuruu ruvara uye rutsvuku ruvara kunopa vanhu simba rekuona, izvo zvinoratidza kuti pe ...
Fashoni yekupwanya mhepo / SH-920
Chishongedzo: Yakavharwa tepi, Chipurasitiki zipi Mazwi: Anoratidza anodhinda, Laser gomba kumberi kwepaneruvhiri remhepo rine makore anopfuura zana nhoroondo, uye ikozvino zvinoita sekunge inogona kumira muyedzo wenguva. Masitayera ayo uye micheka ine yavo yega yakasarudzika, iyo inogona kusiya yakadzika pfungwa mukutarisa; kushanda kwayo hakuenzaniswi, munguva yechando inotonhora uye kamwe kamwe inopisa, chigaro chemhepo chinogona kupfekwa ndokubviswa paunoda chero mamiriro ekunze, anogona kukuperekedza kuenda kure awa ...
Slub donje ndeimwe yenyaya dzinoverengeka dzekuruka machira emachira ekotoni. Mucheka uyu unogara uchidhonza uye kunhonga shinda kuti uite slub-senge dhizaini maitiro. Iko kusarudzika kwemucheka werineni wepanyama kune kufema kuri nani uye kuita kwekutora ziya ziya kupfuura zvakajairika micheka yedonje. Iyo sarudzo iri nani yezhizha t-shirts. Shubhu yekotoni ine hunhu husingawanikwe mumachira akajairwa ekotoni, senge kupfava, kukwirira kwemhepo, kutambanudza kuramba, uye ...
Yakasarudzika Polo Shirt / BL-201
Polo t-shati pakutanga yaipfekwa nevanokudzwa pavaitamba polo. Zvichida nekuda kwekunyaradzwa kwayo, yakagara ichifarira mugove wepamusoro wewadhiropu. Nekuti haina kunyanya kusarudzika seye t-shati isina kara kana kuomarara uye yakakomba sehembe, inokodzera nguva dzekutandarira dzekutengesa. Kunyangwe chimiro chePolo t-shati chisina kuchinja zvakanyanya kubva pakuzvarwa kwayo, iwo mavara akajeka uye inoyevedza diki mitsetse yakarukwa kora inowedzera iyo yakazara fashoni. Aya maitiro isu ...
Remukomana Laser kubaya uye kudziyisa bhachi / DK-005
Tsananguro: Laser yemukomana kubaya uye kudziyisa bhachi
Chimiro No.: DK-005
Machira Machira: 100% polyester yakarukwa machira
Bhurugwa refu remukomana SH-1058
Chimiro No.: SH-1058 Ruvara: Navy Saizi Range: 4-12A Mucheka: 66% rayon 29% nylon 5% spandex ponte-de-roma, 315gsm Chishongedzo: Elastic, Plastic zipper Feature: Alphabetical zipper meno Mazano: Muchena & tsvuku muridzo unoridzirwa pazasi yakatemwa & yakasonwa pani
Bhurugwa refu remukomana SH-1057
Chimiro No.: SH-1057 Ruvara: Nhema / Tsvuku Saizi Range: 4-12A Mucheka: 70% donje 25% polyester 5% spandex dehwe, 260gsm Chishongedzo: Drawcord, Nylon zipper Matauriro: Muchena pombi kumberi cheka & yakasonwa pani.
Bhurugwa refu remukomana SH-1056
Chimiro No.: SH-1056 Ruvara: Dema / Chena / Tsvuku Saizi Range: 4-12A Mucheka: 70% donje 25% polyester 5% spandex dehwe, 260gsm Chishongedzo: Drawcord, Mvura-chiratidzo zipi
Bhurugwa refu remukomana SH-1055
Chimiro No.: SH-1055 Ruvara: Dema / Royal Bhuruu Saizi Range: 4-12A Mucheka: 70% donje 25% polyester 5% spandex dehwe, 260gsm Chishongedzo: Drawcord, Plastic zipper
Bhurugwa refu remukomana SH-960
Chimiro No.: SH-960 Ruvara: Dema / Muchena Saizi Range: 4-12A Mucheka: 66% rayon 29% nylon 5% spandex ponte-de-roma, 380gsm Chishongedzo: Elastic, Plastic zipper Mashoko: Kuiswa kudhinda, Red pombi pa divi rakatemwa & rakasonerwa pani
Chimiro No.: SH-955 Ruvara: Navy / Dzvuku / Chena Saizi Range: 4-12A Mucheka: 66% rayon 29% nylon 5% spandex ponte-de-roma, 380gsm Chishongedzo: Elastic Mhinduro: Kuiswa kudhinda